खुशीको लागि समय र परिस्थिति स्वीकार गरौं - Purwanchal Daily
१४ मंसिर २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
एकदिन गुरु र शिष्य गफ गर्दै बाटोमा जाँदै थिए । त्यसैबखत बाटोमा सानो नदी हुन्छ । शिष्य पहिला नै त्यो नदी तरेर अर्को किनारमा पहिला पुग्छ । गुरुले त्यो नदी तर्ने बेलामा अधबैंसे महिला त्यहाँ नजिकै हुन्छिन् । महिला अशक्त र कमजोर भएकोले गुरुले बोकेर त्यो नदी तर्न सहयोग गर्छन् । त्यो नदी तरेको शिष्यले देखिरहेको हुन्छ । शिष्यको नियत खराब हुन्छ । शिष्यले भन्छ– गुरुजी तपाईंको यस्तो हुनुहुँदोरहेछ महिले कहिले सोचेको थिइन् । गुरुजी भन्नुहुन्छ– के कुरा बालक ? त्यो महिलालाई तपाईंले कसरी बोक्नुभयो । त्यो कुरा सुनेर गुरुजी हाँस्नुभयो । बालक ती महिलालाई त्यहीँ नेर भएको किनारमा छोडेको दुई–तीन घण्टा भइसक्यो । त्यो कुरा अहिले गर्दैछौ ?
वास्तवमा भन्ने हो हामी के गर्छौ भने विगतमा भएको नराम्रा घटना सम्झिन्छौं । बितेको कुरालाई सम्झेर हामी दुःखी हुन्छौं । हाम्रो मन कि त भूतकालमा जान्छ, कि त भविष्यकालमा जान्छ । मन कहिल्यै पनि स्थिर हँुदैनन् । मन चञ्चल हुन्छ । कथामा भएको शिष्यले गुरुले गरेको हर्कत देखेर । उसको मन बितेकै कुरालाई मनमा ल्याएर ऊ दुःखी भएको थियो । हामी दैनिक जीवनमा पनि अरुको गल्ती, बर्षौंअघिको दुश्मनी सम्झेर छरछिमेकीमा बोलचाल समेत बन्द गर्छौं । एउटा सानो गल्तीको कारणले सम्बन्धमा फाटो आउँछ । हामी दुश्मनी निभाउन जान्दछौं, तर माफ दिन सक्दैनौं । बितेको नराम्रा घटना बिर्सेर सुन्दर भविष्यको लागि वर्तमान समय जिउन जो सक्छ । उसले नै वास्तविक खुशीको अनुभव गर्न सक्छ ।
भूतकाललाई बिर्सिने हो । भविष्यको योजना बनाएर । वर्तमान समयमा जीवन जिउनुपर्छ । खुशी भोलिमा हुँदैन आजमा छ । जीवनमा आएको जस्तोसुकै परिस्थिति होस् हामी त्यो समयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । समय बिग्रिए पनि मानिसको मनस्थिति बिग्रन दिनु भएर । वर्तमान जीवनमा जीवन जिउन गाह्रो छ । हाम्रो मन भूतकाल र भविष्यकालमा जान्छ । शुरुमा त्यो समयलाई स्वीकार गर्ने अनि मात्र एक्सन लिने हो । त्यो समयलाई स्वीकार गर्न नसकेर मान्छेभित्र क्रोध पैदा भएर विभिन्न अपराधी क्रियाकलाप गर्न पुग्छन् । त्यो भएर समय स्वीकार गर्दा मन शान्त हुन्छ । जीवनमा आइपर्ने कठिन परिस्थितिमा सहज दङ्गले हामी अघि बढ्न सक्छौं । विभिन्न परिस्थिति होस वा त्यस्तो समयमा धैर्य गर्न आवश्यक छ । खुशी जीवनको लागि हाम्रो मन शान्त बनाएर अनुशासन धर्यको साथसाथै समयलाई स्वीकार गरेर वर्तमान समयमा जीवन जिउन अभ्यास गर्नुपर्छ ।
बालबालिकाहरु खेलेको तपाईंले देख्नुभएको छ । हाँसी रहेको देखिन्छ । उनीहरुको अनुहारमा कुनै तनाव हुँदैन । उनीहरु जे गर्छन्, शतप्रतिशत मन लगाएर गर्छन् । हाँस्ने खेल्ने, रुने त्यसमा शतप्रतिशत दिएर गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरु वर्तमानमा जीउछन् । उमेर बढ्दै गएपछि घरपरिवार र जिम्मेवारीले तनाव हुने भएकोले बालबालिकको उमेरमा हुने खुशी, आनन्द ऊ भित्र हराउँदै जान्छ । मान्छेहरु विभिन्न परिस्थितिमा गुज्रिएन पुग्छ । कोहि मान्छे पानी पर्नुलाई समस्याको रुप लिन्छन् । त्यहीँ पानी पर्नु किसानहरु अवसर मान्छ्न् । जीवन जिउने क्रममा विभिन्न बाधा–अड्चन चुनौति आइपर्छन् । सुख–दुःख सबै परिस्थिति स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । रीस र आवेगमा आएर विभिन्न अपराध गर्न पुग्छन् ।
जुन समय र परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यसमा दुःखी भएर के गर्ने ? जस्तो कि दूध उम्लिएर पोख्यो । मोबाइल हातबाट झ¥यो । हिँड्ने बेलामा पानी प¥यो । चर्को घाम लाग्यो । जुन परिस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन त्यो कुरामा दुःखी, चिन्तित हुने कारण छैन । बितेका त्यो घटना गइसक्यो । त्यो कुरा सम्झेर चिन्तित, दुःखी भएर हाम्रो मनलाई किन अशान्त बनाउने । हाम्रो मनको स्वभाव के छ भने । प्रायः गरेर बितिसकेको घटनाहरु आइरहेको हुन्छ । त्यो घटनाले अझ हाम्रो मनलाई तनाव र अशान्त बनाइदिन्छ ।
खुशी, आनन्द, शान्त अहिलेको समयमा छ । मान्छे दुःखी हुने कारण भोलि के होला, कसो होला । भविष्यमा जिउछन् । तर, आजको खुशी, आनन्द, शान्त मनको तलासमा लागिरहेको छन् । जो आज दुःखी छ । अशान्त छ । उसको मन बेचैन भएको छ । भोलिको दिनमा ऊ कसरी खुसी हुन सक्छ । जीवनमा त्यस्ता परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर त्यसपछि सही निर्यण लिन सक्नु हो । वर्तमानलाई स्वीकार गरेर त्यो समयमा जिउन सक्नु हो । हामी कुनै पनि घटना तथा परिस्थिति शुरुमा स्वीकार गर्छौं । त्यो समयमा हाम्रो मन शान्त हुन्छ । शान्त भएपछि त्यो समस्यालाई समाधानको विकल्प बाटो रोज्न सकिन्छ । मान्छेहरु सफल कसरी हुन्छन् । मेहनत, धैर्य, लगन अनुशासन त्यो समयलाई स्वीकार गर्छन् र वर्तमानमा रमाउँछन् । त्यस्ता व्यक्ति जीवनमा सफल पनि हुन्छन् ।
Previous articleविद्यालय खुल्ने होइन, सहजीकरणको स्वरुपमात्र परिवर्तन
Next articleसंवादहीनता अन्त्य होस्